Basel 1,2and3and Nepalese banking sector (बासेल १, २ र ३, र नेपाली बैंकिंग क्षेत्र ) by बीएन घर्ती – Study Deeper
By बीएन घर्ती (श्रोत )
आखिर बासेल जन्माउने कस्ता घटना भएका थिए रु बासेल–१, बासेल–२ हुँदै बासेल–३ किन लागू गर्नु पर्यो?
बैंक बन्द भएपछि त्यससँग बिदेशी बिनिमय कारोवार गरेका अन्य बैंकले भुक्तानी पाएनन् । जुन जोखिमलाई आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा हरस्ट्याट ९सेट्टलमेण्ट रिस्क० जोखिम भन्ने गरिन्छ । ‘ब्रेटन उड्स सिस्टम्’ हटेकाले यो बैंक असफल हुन पुगेको ठानिन्छ ।
के हो ब्रेटन उड्स सिस्टम्?
त्यस्तैगरी, ती देशमा सुन र अमेरिकी (युएस) डलरमा आधारित स्थीर मुद्रा बिनिमय प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गर्यो । १ औन्स सुन बराबर ३५ यूएस डलर कायम गरिएको थियो । १ ट्रोय औन्समा ३१।१०३५ ग्राम हुन्छ ।
बासेल कमिटी अन् बैकिङ सुपरभिजन हरस्याट घटना पछि जी–१० राष्ट्रका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरहरु बासेलमा जम्मा भए । पुँजीका तुलनामा अत्यधिक जोखिम उठाएकाले हरस्ट्याट घटना घटेको निचोड निकाले ।
१९८८ एकर्डलाई पटक पटक शंसोधन गरियो । सन् १९९६ मा शंसोधन गर्दा बजार जोखिमलाई समेत समेटियो । बजार जोखिम गणना गर्दा भार ९भ्यालु एट रिस्क० का आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरियो ।
READ Balance of Payment: A Concise Explanation
त्यसैका आधारमा सन् २००४ मा ‘शंसोधित पुँजीको रुपरेखा’ ९रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क० प्रकाशित भयो । त्यसैलाई बासेल–२ भनिन्छ । यो सन् २००६ बाट लागू भयो ।
पहिलो खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था भयो, जस अनुसार बैंकले आवश्यक पुँजी नभइ जोखिम उठाउन नसक्ने भए । यस व्यवस्था अनुसार बैंकले बुझेर मात्र जोखिम ९क्याल्कुलेटिभ रिस्क० उठाउने हुनाले जोखिम न्यूनीकरण हुने बिश्वास लिइयो ।
त्यसैले कम्तीमा ३ प्रतिशत लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्राथमिक पुँजी ९टायर९१ क्यापिटल० लाई बैंकको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरेर यो अनुपातको हिसाब निकालिन्छ ।
उच्च गुणस्तरयुक्त तरल सम्पत्तिलाई ३० दिनभित्र बाहिरिन सक्ने रकम ९निक्षेप अथवा दायित्व० ले भाग गरेपछि आउने अनुपातलाई तरलता अनुपात भनेर परिभाषित गरियो । र, यो अनुपात कम्तीमा १०० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि व्यवहारिक र वास्तविकरुपमा यो अनुपात निकाल्न असाध्यै कठिन हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त २।५ प्रतिशतको पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक ९क्यापिटल कन्जरभेशन बफर० को व्यवस्था बासेल–३ ले गर्यो ।
यसरी बासेल–३ अन्तर्गत जम्मा पुँजी पर्याप्तता १०।५ प्रतिशत हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ८ प्रतिशतको तुलनामा बैंकले स्वतः कम जोखिम उठाउन सकुन् भनेर अंकुश लगाइएको देखिन्छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपातले कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्छ रु
पर्याप्त पुँजी नभइ जोखिम उठाउन नसकिने भएको बैंक जोखिम स्वतः न्यूनीकरण भएर जाने कल्पना बासेलले गरेको छ । तर, त्यति हुँदा हुँदै पनि किन बैंकहरु फेल हुन्छन् रु प्रश्न सहजै उठ्छ ।
बासेल–३ अन्तर्गत अन्य देशमा क्यापिटल कन्जरभेसन बफर सहित १०।५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
Our articles on Banking
Previous Post9 Major Amendments in NRB Directives 2075
Next Post17 Key Clauses of Negotiable Instruments Act
28 Major Highlights of Monetary Policy of Nepal 2075-763 min read